2077 माघ 9, शुक्रबार
राष्ट्रवादको मनसुनमा डुबेकी बर्षा
उषा पाण्डे/ सिनेपाटी | प्रकाशित: २०७७, जेष्ठ १२, सोमबार
देश प्रेम अनि राष्ट्रियता एउटा यस्तो संवेदनशील विषय हो जसको कारण संसारमा कयौँ ठुला युद्ध भएका छन् । कयौँले ज्यान गुमाएका छन् र आज पनि संसारका कति ठाउँमा यसै विषयलाई लिएर युद्ध जारी छ । हरेक मानिसको जीवन अस्तित्व आफ्नो माटोसँग जोडिएको हुन्छ र यस कुरालाई सजिलै लिन कसले सक्छ र ? आफ्नो ज्यान आमा बुवा भन्दा माथि सधैँ देश रहन्छ । देश दुख्दा सबैको मन दुख्छ, देश रुँदा सबैको मन रुन्छ अनि देशमाथि कसैले धावा बोल्दा रगत तातिएर आउँछ । यो बेला देश दुखेको छ, नेपालको अस्तित्व माथि धावा बोलिएको छ र हाम्रो माटोमा पराईको आँखा परेको छ । हो, यसै बेला हो सारा नेपाली एकजुट हुने र सबैले एउटै आवाज उठाउने र एक अर्कालाई साथ दिने । कुनै पनि युद्ध एक जनाले अगाडी बढेर जितिँदैन । यसको लागी सबै एक मत हुनु पर्छ र यति बेला हरेक नेपालीको मन एकजुट भइरहेको पनि छ । एकातिर कोरोना कहरको पिडा अर्को तिर छिमेकी देश भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको पिडा । यति बेला नेपाली टुटिरहेका छौँ, योसँगै एकताका लागी आफ्नो देशको अस्तित्वको लागी जुटिरहेका छौँ । यो समय हरेक नेपालीले एक अर्काको साथ र आवाज समेट्न खोजिरहेका छौँ । यो अस्तित्वको लडाइँमा आफू भन्दा देश र स्वाधीनताको लागी लडिरहेका छौँ । नेपालीको एकजुटता, देश प्रतिको प्रेम अनि स्वाधीनताको मर्म बुझ्दै सरकारले विवादित क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा,कालापानी सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । जसले देशले आफ्नो भूभाग, आफ्नो माटो गुमाउनु नपर्ने नयाँ आशाको किरण त ल्यायो योसँगै भारतीय हस्तक्षेप आलोचना अनि नेपाली नेपाली बिचको विश्वास अनि आत्मसम्मानमा पनि प्रश्न उठायो । नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई सह्य हुने कुरै भएन जसको कारण भारतले भारतीय मिडियालाई ढाल बनाएर अगाडी बढ्यो । जसको सिकार भइन् भारतमा बसेर कलाकारिता गरेर नाम अनि सम्मान कमाएकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइराला ।
उनले आफ्नो जन्मभूमि, पिता पुर्खाले जोगाएको मुलुकको अस्तित्वको पक्षमा बोल्नु उनको लागी विवादमा र आलोचनामा तानिने मुख्य कारण बन्यो । यो विषय नेपालको लागी उपलब्धि मूलक भयो किनकि भारतका हरेक जनताले थाहा पाए कि नेपाल एक स्वधिन देश हो जो भारत लगायत कुनै पनि देशको अधिनमा बस्दैन र यो स्वीकार गर्दैन । यो विषयमा नेपाली कलाकार, सेलिब्रेटी लगायत आम नेपालीले समर्थन र स्वागत गरे । यस विषयमा नेपाली कलाकार सेलिब्रेटी निकै अगाडी आए । उनीहरूले मनिषाको विचार र उनको देश प्रेमलाई समर्थन गर्दै आफ्नो विचार राखे र देशको लागी जे पनि गर्न तयार भएको बताए । केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडिया यही कुराले रङ्गिन बन्यो । मनिषाको विचार र सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साको समर्थन गर्दै अभिव्यक्ति दिने कलाकार मध्यकी एक कलाकार हुन् नायिका वर्षा राउत । उनले पसिना बेच्न सकिने तर आमा बेच्न नसकिने भन्दै हाम्रो मातृभूमि र हाम्रो स्वाभिमान प्रतिको हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य छैन भन्ने अभिव्यक्ति राखिन् । साथमा उनले भारतीय मिडियाले मनिषामाथी गरेको आक्रमण र अपमानको भर्त्सना गर्ने पनि उल्लेख गरिन् । उनको यस विचारलाई हजारौँले मन पराए र सबैले आफ्नो आवाज बनाए । उनीसँगै हरेक नेपाली कलाकारले आफ्नो देश र देशको इज्जत माथि हुर्मत लिनेलाई कहिल्यै माफी गर्न नसकिने विचार राखे जसलाई सबैले स्वागत गरे ।
के भनेकी थिइन् त अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले जसले उनलाई भारतीय मिडियाको तारो बनायो ?
मनिषाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेको ट्विट सेयर गर्दै 'हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद । अब हामी तीन महान् देशहरूबिच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ' लेखेकी थिइन् । जसको अर्थ थियो 'देशले आफ्नो आत्मसम्मान बचाएको छ र अब तीन देश अर्थात् नेपाल भारत र चीनबिच टेबल टक हुनु पर्छ' हो ।
मनिषाले आफ्नो अभिव्यक्ति राखे पछि कलाकारले विचार राख्ने क्रम सुरु भएसँगै चर्चामा आएको विषय हो नायिका वर्षा राउतको । वर्षाले सिनेपाटी टिभीको एक अन्तर्वार्तामा एक अर्कासँग झगडा गरेर यो विषय समाधान हुने होइन बरु दुई देश बसेर टेबल टक गर्दा यो समस्याको हल हुन्छ भनिन, उनले दुई देशका जनता बिच भइरहेको वैमनस्यताको कारण सदियौँ लामो मित्रता टुङ्गिने हुन्छ र हामीले अप्ठेरोमा पार्ने विचार राखेकी थिइन् । उनले बोलेको केही सेकेन्डको भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनी विरुद्ध एउटा लहर नै निस्कियो जसले उनको यस विचार मात्र होइन व्यक्तिगत विषय र अन्य कुरा जोडेर उनी प्रति घृणा पैदा गरिदियो । उनलाई देश द्रोहीको आरोप देखी उनको आत्मसम्मानमा आँच आउने खालका कुरा पनि उठिरहेका छन् । हरेक मान्छेको विचार व्यक्त गर्ने आफ्नो शैली हुन्छ उसले आफूलाई लागेको कुरा आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गर्छ । वर्षाले अन्तर्वार्तामा अनौपचारिक रूपमा द्वेष नफैलाऔँ आशयको विचार राखिन् जसले उनलाई मानसिक एवम् सामाजिक रूपमा दुर्व्यवहार खेप्नु पर्ने बनाइयो ।
केही दिन पहिले नेपाली मिडियामा एउटा विषयले निकै चर्चा पायो त्यो हो बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले निर्माण गरेको वेब सिरिज 'पाताललोक'मा नेपाली महिलालाई सम्बोधन गरी गाली गरिएको विषय । उक्त सिरिजमा गरिएको गालीले नेपाली महिलाको आत्मसम्मानमा आँच आएको र यसले भारतले नेपाली प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नीच भएको आवाज उठ्यो । सिरिज निर्माताले माफी माग्नु पर्ने र त्यो सिन नै हटाउनु पर्ने माग आयो जुन जायज छ र यस किसिमको अत्याचार हामी नेपालीले सहन सक्दैनौँ र स्विकार्दैनौँ ।
अब कुरा आयो आफूले गरेको गालीको । सिरिजमा गाली गरिएको विषयमा अभिनेत्री केकी अधिकारीले भनेकी थिइन् 'भो छोडिनुस् , आफ्नाले भन्न छाडेका छन् र अरूले नभनुन् ?आज अरूले आफ्ना चेलीबेटीलाई देशकै नाम लिएर तुच्छ गाली गर्दा साह्रै चित्त दुख्यो ? मन पोल्यो ? रगत उम्लेर आयो ? आफ्नै भनाउँदा हरूबाट यस्ता गालीहरू मुख अगाडी , मुख पछाडि , सामाजिक सञ्जालमा, युट्युबमा वाल्छ्याल्ती नसुनेका, नदेखेका हौँ र ? हो, हामीबाटै सिकेका हुन् । यिनीहरूलाई भन्न मिल्ने रहेछ भनेर हामीले नै उकासेका हौँ । छातीमा हात राखेर भन्नुस् त हामीले आफ्नै देशका दिदीबहिनीलाई यस किसिमका अपहेलना कति गरेका छौ ? अनि हामी यो आशा गरिरहेका छौँ कि अरू चाही बदलिउन् । तर आफूलाई त जति पनि अधिकार छ महिलाको चरित्र हत्या गर्ने ? हैन ?' यति बेला केकी को यो कुरा हामी आफैले सत्य साबित गरिदिएका छौँ ।
हामीले आफ्नै चेली, आफ्नै देशको गहना विरुद्ध यसरी द्वेष पैदा गर्‍यौँ लाग्छ उनले ठुलो राष्ट्र घात गरेकी छिन् जसको सजाय बिच बजारमा राखेर सबैले ढुङ्गा हानेर पिडा दिनु हो । पराईले आफ्नो छोरी चेली आमा दिदी बहिनिलाई गाली गर्दा खुकुरी लिएर तम्सिन तयार हामी आज आफ्नै चेलीले देशको लागी अनि आफ्नो भविष्यको लागी शान्ति पूर्ण वातावरण सृजना गर्नु पर्छ भन्ने आशयको विचार राख्दा आमचकारी गाली दिन लज्जित हुँदैनौँ । बरु यसलाई देश प्रेम , आत्मसम्मान मानेर गर्व गर्छौँ । सोच्ने नै हो भने यति बेला हामीले हामी विरुद्ध नै लडिरहेको यो लडाइँ देखेर हामीलाई तल देखाउन आतुर भारतीय मिडिया खुब रमाइरहेका होलान् । घर भित्रको यो लज्जित लडाइँमा स्वाद लिनेको सङ्ख्या पनि कम नहोला । भारत यति बेला नेपालका कमजोरीको खोजीमा छ एक अर्काको लडाइँ भन्दा माथि उठेर समाधानको विषयमा लाग्नु पर्ने समयमा यसरी गाली गलौच अनि अपमानको खेती गर्दा भन्डार कसको भरिने हो त्यो सबैले सोच्नु पर्ने होकी?
गायिका स्मिता दाहाल (फोटो फिचर)
राहुल र स्वस्तिमाको "झम्के माया" (भिडियो)
युट्युब ट्रेन्डिङमा "छ माया छपक्कै"
फ्लोरमा गयो मुकुन र मेनुका को "गणपती"
चलचित्र "परदेशी २" को रिलिज मिति तय